SOMALITALK - TAF
Ururkii TAYO oo TAF isu beddeley:
Ururka Tayo waxa la aasaasay dabayaaqadii sannadkii 2005-tii. Waxaana aasaasay dhallinyarada gobolka Togdheer ee degen dalka Ingiriiska. Ujeeddada ururka loo aasaasay waxay ahayd inuu waxtar ka geysto arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo cayaaraha ee gobolka Togdheer. Intii uu jireyna wuxuu geystay waxtar la taaban karo isaga oo sannadkii 2006 ugu deeqay Cusbitaalka waalida ee Maandhaye ee Burco lacag dhan $2,000. Ururku wuxuu sannadka 2007da qorshihiisa sannadlaha ah ku ballanqaaday inuu la dhammeeyo dhismaha cusbitaalka Maandhaye ee magaalada Burco. Muddadii koobnayd ee ururka jirey wuxuu ku guulaystay inuu laamo (branches) ka samaysto dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Ingiriiska. Dalalka Yurub iyo Amerikana laamo ayaa lagaga dhowaaqay. Wuxuu kaloo ururku ku guulaystay inuu isu keeno oo mideeyo fikradda, talada iyo tabaruca dhallinyarada gobolka Togdheer.
Intaa ka dib ururku wuxuu u hawl galay siduu urur ahaan isu dhisi lahaa, xubno badan oo boqol gaadhayana u kasban lahaa, siduu u samaysan lahaa mareeg casri ah iyo siduu u heli lahaa lambarka charity-ga iwm. Isla wakhtigaa ururku sida xeerkiisa ku cad waxa uu sameeyey in uu beddelo hawl-wadeennadii sannadkii hore, waxaana 24 Dec 2006 lagu qabtay shirweynihii sannnadlaha ahaa magaalada London. Waxa halkaa lagu doortay guddi cusub, waxaana lagu go'aamiyey qorshaha sannadka 2007 oo ah inuu ururku la dhameeyo dhismaha Cusbitaalka waalida ee Maandhaye ee magaalada Burco.
Doorashadaa ka dib, ururka waxa soo foodsaartay dhibaatooyin aad u adag kaddib markii ay diideen laba xubnood oo ka mid ahaa guddidii hore ee fulinta guddidii cusbayd ee la doortay, sababo qabyaaladeed dartood. Ururku xeerkiisana waxa ka mid ahaa inuu qabyaaladda, takoorka iyo siyaasaddaba dibedda ka yahay. Sidaasi darteed xubnahaasi waxay guddidii cusbayd u arkeen in reer laga qaaday, reer kalena la wareegay. Markii ay xubnihii ururku maqleen fadqalalada iyo takoorka ay xubnahaasi ku kaceen way ku gacansaydheen, kuna diiddeen arrintaas. Dabadeedna labadii xubnood ee qabyaalada waday waxay samaysteen guddi cusub oo barbar ordaysa guddidii ururka, kuwaas oo u buuxiyey himiladoodii qabyaaladeed (reerkii ay rabeen ka soo jeedda). Kuwaas oo aan ururkuba ka mid ahayn.
Markii ay taasi dhacday waxa isu tegey xubnihii ururka, waxaana go'aan lagu gaadhay in lala hadlo oo wixii ay tabanayaan lagala xaajoodo, waxaana shuruud lagu xidhay inay ka noqdaan guddida ay sameeyeen ee reerka ku dhisan iyo fekerka sumaysan ee qabyaaladeed ba. Taasna waa lagu guuldaraystay oo horaa loo yidhi "nimay meeli u caddahay meeli ka madow". Cid kasta oo danaynaysay in ururku shaqeeyo ama horumar keeno waa loo direy. Wada xaajood iyo isu tanaasul ba waa laga waayey oo way diideen, "Xaq baannu ku taaganahay, ee Annagu wiil reer hebel1 ah ururkayaga u dabo fadhiisan mayno". Ayey isla soo taageen. "Haddii cidi tanaasul samaynayso idinku taayada nagu raaca" ayey ku adkaysteen. Waxa xitaa lagula taliyey oo xubnaha ururka iyo dad waaweyn oo waxgarad ahi kula taliyeen inay iska dhaafaan qabyaaladda maadaama ay tabaruc u samaynayaan meel "public" ah oo cid waliba isticmaalayso, reer hebel lacagta laga soo guraana aanay reerka magac iyo sharaftoona u soo jiiddayn. Waxay ku adkaysteen inay burburinayaan ururka haddii aanay iyagu madax ka noqon.
Waxayna bilaabeen labadii xubnood ee ururka ka jabay iyo kooxdii ka baxsanayd ururka ee qabyaaladda kula socotayba inay ficiltan iyo dacaayad ay ku dhabar jebinayaan ururka, kuna kala eryayaan xubnihiisa, isla markaana waxay la wareegeen oo ay si shakhsiya u isticmaaleen dhamaan agabkii shaqo ee ururka ee ay gacanta ku hayn jireen oo ay ka mid yihiin websitekii iyo sharcigii ururka. Waxay kaloo bilaabeen inay dhallinyaradii ay isku reerka ahaayeen dacaayad iyo aflagaaddo ku bilaabaan ay leeyihiin "ma inan yar oo reer hebel ah ayaad kaboqaad u tihiin, waar annaga na soo raaca" kuwii diiday ee ka gacansaydhayna waxay ku yidhaahdeen "waa la idinku shaqaysanayaa" iwm. Arrintan oo runtii caqabad weyn ku noqotay hawlihii ururku inay u fulaan sidii la rabay.
Markii xubnihii ururku ay si kastaba isu dayeen inay xalilaan dhibaatadaas, muddo laba bilood ahna ay afka gacanta ku hayeen, waxay talo isugu soo ururtay labo.  Ma fekerkaa buka ee qabyaaladaysan ee indhaha la', dibusocodka ah, takoorka iyo kala eriga ku salaysan, ayeynu raacnaa. Mise  waxaynu ka rumaynaa qodobka labaad ee xeerka ururka oo dhigaya in ururku qabyaalad, takoor iyo siyaasadba ka madax banaan yahay. Taa dambe ayaanna go'aankii noqday xubnihii ururkii TAYO oo dhan marka laga reebo labadaa xubnood ee feker habaabay, ayaa shir isugu tegey magaalada Coventry, Sabtidii dhoweyd ee 24 Feb 2007.
Kaddib markii ay xubanaha ururku tixgaliyeen arrimo door ah oo ay ka mid yihiin maadaama labadaa xubnood ay magicii ururka u adeegsadeen qabyaalad, agabkii shaqo ee ururka u isticmaaleen si gaar ahaaneed. Waxay xubnihii ururku go'aansadeen in magaca ururka looga guuro si loo badbaadiyo ujeedadii iyo himiladdii ururka. Waxaana magicii ururka loo beddelay Togdheer Abroad Foundation oo loo soo gaabiyey "TAF". Ururka TAF ujeeddadiisa, himiladiisa iyo hawlgalkiisuba isma beddelayaan, ururku waa kii uun, balse magaca oo naga qabyaaladoobay ayuun baannu nasteexo ahaan uga guur-nay. Laamihii iyo xubnihiisuba sidii ayey ahaanayaan, hawshiina halkii ayaa laga sii wadayaa.
Go'aankan oo ah mid runtii aad u dag in badana ay xubanaha ururku ka fekerayeen ayaa wuxuu tahay mid munaasib ku ah xaaladan qalafsan ee kala guurka, lana kala dooranayo dibusocodnimo iyo horusocodnimo. In ururka lagu hoggaamiyo qabyaaladaa iyo waxyaalahaa foosha xun ee dib u socodka ah, lana joojiyo hawshii wacnayd ee samafalka ahayd iyo in godkii la inagu qaniinay aynu ka guurno, ku cimro qaadanno casharkaa, kuna midowno si walaaltinimo leh oo aynu gobolkeenii waxaynu u qabankarno qabano.
Haddaba, dhamaan xubanaha ururka TAF (Togdheer Abroad Foundation) waxay ugu baqayaan dadka daneeya inay wax ku celiyaan dhulkii hooyo ama jecel inay wakhtigooda dheeraadka ah wax ugu qabtaan dhulkeenii baahnaa inay kala qaybqaataan hawshan samafalka ah oo aakhiro waxtar u leh qofkii ka qayb qaata. Waxa kale oo aannu ka codsanaynaa saxaafadda in aanay garabsiin wax-ma-garata dibusocodka ah ee raba inay wiiqaan ururka midaysan ee maangalka horusocodka ah.
Fadlan waxaad la xidhiidhaa madaxda laamaha ururka ee magaalooyinka UK
Faarax Xariir 07960375381 Liverpool
Cabdiqaadir Xirsi Ducaale 07957537667 Bristol
Abokor M. Cariish 07944865902 Sheffield
Maxamed Xirsi Cumar 07908482350 Birmingham & Coventry
Cabdicasiis Maxamed Axmed 07951305371 London
Maxamed Ismaciil Cabdale 07940434170 Manchester
Dhamaan Xubanaha Ururka TAF